China Steel isakhiwo ifektri multi-ezinamakhaya ifektri abakhiqizi | Honghua
Isakhiwo se-Wuhan sentosa Isakhiwo Sokwakheka Kwesakhiwo: Ukhonkolo ogcwaliswe ngensimbi oyishubhu (28 phansi) • Uhlelo lwesakhiwo sohlaka olungafakwanga luqukethe ugongolo nohlaka lwekholamu amanye amatheku agcwala ngamatshe, ukhonkolo oqinisiwe, noma izindonga ezivimba.
I-Wuhan sentosa mansion Izici Zokwakhiwa: Ukhonkolo wagcwalisa isakhiwo sensimbi (28 phansi)
Kutholakala ku: No.199, Wansongyuan Road, Jianghan District, Wuhan City
Imvelo ezungezile: Ipaki yaseZhongshan, iWuhan International Convention kanye neSikhungo Sokubonisa, Isitolo Somnyango Omusha
Ithrafikhi: 20 km ukusuka esikhumulweni sezindiza; Amakhilomitha ama-3 ukusuka esiteshini sesitimela;
Uhlaka lwesakhiwo esine-infilled
Isistimu yohlaka lohlaka olungafakwanga luqukethe ugongolo nohlaka lwekholamu amanye amatheku agcwaliswe ngamatshe, ukhonkolo oqinisiwe, noma izindonga ezivimba.
Izindonga ze-infill zingaba yingxenye-ukuphakama noma zigcwalise ngokuphelele ifreyimu.
Izindonga zingaxhunyaniswa nefomu.
Ukuqina kokuqina namandla wezindonga kuvimbela ukugoba kwemishayo namakholomu ngaphansi kwemithwalo evundlile. Ngenxa yalokhu, ukusebenza kwesakhiwo kuzothuthukiswa.
Ngesikhathi sokuzamazama komhlaba, ifomu lokucindezelwa kwe-diagonal lakha kuma-infills ukuze isakhiwo siziphathe njengohlaka olubunjiwe kuneFreyimu Yesikhashana.
Ingakha izakhiwo eziyizitezi ezingama-30.
Uhlelo lwe-Shear wall
Udonga oluqondile oluqondile olwakhiwe ngokhonkolo oqinisiwe noma udonga lokwakha.
Izindonga ze-Shear zimelana namandla adonsela phansi kanye nemithwalo ye-lateral, futhi isebenza njengogongolo oluncane lwe-cantilever.
Imvamisa, yakhiwe njengengqikithi yezakhiwo
Ifanele kakhulu ukubopha izakhiwo ezide noma ukhonkolo oqinisiwe noma isakhiwo sensimbi. Lokhu kungenxa yokuthi izindonga ze-shear zinokuqina okukhulu kwendiza namandla.
Isistimu yodonga lwe-Shear ilungele izakhiwo zehhotela nezokuhlala lapho ukuhlela okuphindaphindayo phansi kuya phansi kuvumela izindonga ukuthi ziqhubeke zibheke phezulu.
Kungasebenza njengama-insulators amahle kakhulu we-acoustic kanye nomlilo phakathi kwamakamelo nezindawo zokuhlala.
uhlelo lwesakhiwo sodonga lwe-shear lungaba ukonga kuze kufike esakhiweni sokwakha izindaba esinezindaba eziyi-35
Izindonga ze-Shear azidingi ukulingana ngokuhleleka, kepha ukulinganisa kuyakhethwa ukuze kugwenywe imiphumela ye-torsional.
Langaphambilini Ukwakhiwa kwensimbi esiteshini sesitimela esinejubane elikhulu
Olandelayo: Izitebhisi zokuvunguza zensimbi